Update: बारा जिल्लाको हावाहुरी प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन - LiveMandu
विभिन्न प्राकृतिक विपत्तिका घडी आफ्नो उपस्थिती तथा व्यवसायीक गतिविधिले सामाजिक प्रभाव छाड्न सफल नेपाल प्रहरीले बारा जिल्लाको आँधिहुरी प्रभावित क्षेत्रमा प्रहरी परिचालनको अवस्वाबारे जानकारी दिएको छ ।
प्रभावित स्थानहरुमा खोज, उद्धार तथा राहतलाई तीब्रता दिन होजो राती देखि नै प्रदेश नं २ का प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरिक्षक हरि बहादुर पाल समेतको टोली परिचालित गरेको छ । हाल प्रत्यक्ष रुपमा खोज, उद्धार तथा राहतका लागि परिचालित प्रहरी जनशक्ति निम्नानुसार रहेको छः
जिप्रका बारा प्रउ सानुराम भट्टराईको नेतृत्वमा २५० भन्दा बढी प्रहरी जवानहरु । रातोमाटे गण प्र ना नि राम अधिन बैरेको नेतृत्वमा २५ जना । जिप्रका पर्सा प्र ना उ मान बहादुर राईको नेतृत्वमा १५ जना । दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी गण, हेटौडा प्र स नि अनिल कुमार मिश्रको नेतृत्वमा २५ जना । स प्र गण, जनकपुर प्र ना नि बच्चा प्रसाद साहको नेतृत्वमा २० जना । नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्ज प्रा प्र ना उ डा. सुरेन्द्र शाहको नेतृत्वमा ९ जना तथा नेपाल प्रहरी अस्पताल, महाराजगञ्जबाटै प्रा प्र ना उ डा. अमिन कुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा १० जना गरी ३५४ जनाको टोली प्रभावित स्थानमा परिचालित भएका छन् ।
Tags: आँधीहुरीउद्धारखोजनेपाल प्रहरीपर्सापीडितबाराराहतहावा हुरी
तस्विर दुरुपयोग गरी सामाजिक संजालमा पोष्ट गर्ने दुई जना पक्राउ: